Muna Axmed Cumar: Goblan!
Hudheelkiisu wuxu ka mid yahay kuwa ugu shacbiyadda iyo suuqa badan magaalada. Afar iyo labaatanka saacadood wuu furan yahay. Buuqa iyo sawaxanka haddaad soo gasho waxa aad ku dawakhaysaa tirada dadka is dhaafdhaafaya, marka aad fadhiisatana in door ah ayay kugu qaadanaysaa helidda mudalab kuu keena waxa aad rabtid. Marka aad mid labada gacmoodba buuxaan dirqi ku heshidna waxa aad sugaysaa ku dhawaad saacad in uu kuu keeno wixii aad dalbatay.
Mulkiilaha hudheelkan waa Caligaab oo ka caan ah agagaarkaa. Waa dhallinyaro wali muu guursan, ma guur buu haleelayaa waqtigiisu maba dheera u adeegida meherada iyo xisaabinta habeenkii lacagta soo gasha. Waligii hal hal u gee muu dhigan haddana cid aan isaga ahayni ma xisaab xidho hudheelkiisa oo kumaba aammino. Shaqaale aan tiro lahayn ayaa u shaqeeya mid walba mushaharkiisa oo aan shillin ka dhinnayn ayuu bisha bilawgeedaba u qaddimaa balse qaylo iyo canaan joogto ah ayaa u dheer. Malaha mar kaliyaba ma aammuso oo sida uu u qaylinayo ayuu gabbalku ugu dhacaa, shaqaallaha qaar maba heshiiyaan oo maalin galinkeed marka ay la joogaan way ka hulleelaan. Oo miyay u adkaysan karayaan ninkan gaaban ee dadka dhirbaaxaya ama kubaayadda maraqa ah ka jaraya kuu arko isagoo meel taagan?
Labadii sannadood ee u dambeeyay ayuu hudheelkiisu sidan u cammirmay, sannadkii ka horreeyay maalintii uu furay iyo siduu ku furay Ilaahay uun baa ogaa. Maalinti uu hudheelkiisa albaabbada u ballaqay shan iyo toban cisho cidi koob shaah ah kamay cabbin, quus inta uu istaagay ayuu albaabbadaba u laabi gaadhay. In uu yara samro ayuu talo ku gaadhay maadaama uu xaallado intan ka adagba u soo taagnaa. Ilaahay u barakee oo siday maalinba maalinta ka danbaysa isku soo taraysay waataa maanta magaaladoo dhami u casho tagto.
Qol yar oo albaab hore uun leh ayuu ku bilabay. Cuntadana maqsinka dhabarkiisa ayuu ku karin jiray, maanta se sekad dhan ayuu isku fidiyay oo qayb rag iyo qayb dumarba wuu leeyahay.
Halkaa maqalka dushiisana isagoo kursi aad u dheer dhakada uga baxay baa soo fadhiya. Daanku in uu qarxo ayuu ku dhaw yahay oo kiiloo jaad ah ayuu taqsiisan yahay. Labada dhafoor waxaad moodaa in ay dibadda uga soo boodeen, calooshu way hor goglan tahay, koob shaah ah oo kulul ayuuna gacanta ku hayaa indhihiisu mar kaliya ma joogsanayaan ee waa ay meerayaan intii aragtidiisu gaadhi karto oo dhammaan hawlaha huteelka ka dhex socda ayuu toos ula socdaa. Qaylo ayaa intaa u dheer
“Waaryaa kaalay dadkan u shaqee”
“Adiga maxa ku taagay odaygaasi goorahaaba wuu fadhiyee orodoo u gee wuxuurabo” ayuu ku kala amrayaa shaqaalihiisa, dhinacna lacagta ayuu dadwaynaha ka qabanayaa kana tirinayaa.
“Kaagaa faraxalanayaa, adigu lacagtii maad ii dhiibtay!”
“Goormaannu kuu dhiibnaa sownagan imika uun cuntadii ka faraxalannay maaha! kan iimaanka la’ muxuu ahaa”
“Waar waanu naqaannaa noocaagaas intuu shan saacadood faraha maydho marka dambana albaabka ka booda ee iska bixi lacagta waxba faraxal ha ku meeraysane!”
Qub qac! dirqi ayaaba lagu kala qabanayaa wiil dhalinyar ah iyo Cali gaab oo goorahanba murankooda dadku u wada jeeday.
Waa dabeecad xun yahay maalin walba dhawr qof way is dagaalaan qaar kubbaayadda uu wax ku cabayo ayuu dhakada ka saaraa oo hadhowna dib u bixiyaa dhayitaankooda, haddana meheradiisu isma dhinto oo waa la buuxaa uun. Cajiib!
Habeenkii marka uu xisaabiyo ee uu lacagta sidaa u raseeyo ayuu mabsuudaa oo intuu lacagta barkinta hoos dhigto isagoo dhoollacadaynaya seexdaa.
“Gaadhi yar oo aad alaabta ku soo qaaddo ma iska iibsataa tolow?!,oo maalin walba ma shidaal baad u haysaa,Maya iska daa”
“Oo ma lacag aad ku guursato ayaad haysataa horta?”, “Haa intaad uruursatay hadaad tiriso kolay wuxuunbay noqon”, “ Oo yaad guursan markaa?Waa tuma ta ku yeelaysaa horta? Oo maxay ii yeeli wayday ma dakharo ayaa iga jeexan? Billeed heshiinba waydaan kuwa dumar ah way dhib badan yihiin iyaguna inkaarmoyine. In loo dulqaato ayay rabaan anigu se daanka in aan qaado ayaan ka baqayaa hadday bujuu tidhaahdo”
Waligii gabadh lamuu haasaawin dabeecad xumo iyo haleel la’aan mid ay tahay mooyi sababta uu dumarka ula hadli waayaa. Balse caawa ka hor kumabay soo dhicin guurso waxaana ku keenay maanta ka horba muu arag in cirro madaxiisa shaandhaysay, naxdin waynaa. “Oo sowdigan gaboobay” ayuu is waydiiyay “Horta imisaad jirtay?” Isagoo afartanka ku siqaya ayaa ugu danbaysay dhawr gu’ ka hor hadda se intuu jiro ma hubo.
Caawa hurdo way u iman wayday, intuu jiifi kari waayay ayuu sara fadhiistay oo fikir hor leh bilaabay. Sheekadan guurka ayaa ugu horraysa waxa ku wayn caawa qalbigiisa ee uu hurdo diidka la noqday.
“Haddii aad waa hore guursan lahayd xilligaa dhawr ubad aha ayaad lahaan lahayd oo haddaad caawa dhimato wuxuunbaa kaa hadhilahaa”
“Bal maad barigii tii yarayd ee dhaylada ahayd ee hudheelkakuu xaadhi jirtay guursatid, wax la daayoba may ahayn”, tii oo kale in aanu helayn ayuu isku qanciyay!
Waxa kale oo uu caawa soo xasuustay noloshiisii hore iyo sida uu halkan iyo heerkan ku soo gaadhay. Oo ma dhayal buu ganacsigan horumaray ku keenay bay kula tahay? May. Wuu usoo qaday u saxariiray una bayhoofay. Caligaab bilaash kulama bixin magaca waa nin gaaban isla markaana calool wayn iskuna cufan. Waagu uu magaalada soo galay kuray yar oo dhuuban ayuu ahaa. Barigaa da’diisu kamay badnayn lix sanno. Wuxu ka soo cararay reerkoodii oo degganaa tuulada. Dilmo joogto ah iyo waxsiin la’aan ay u gaysatay gabadh uu aabbihii soo guursaday, kadib markii ay hooyadii geeriyotay ayuu u adkaysan kari waayay kana soo caymaday maalin aabbihii magaalada ku soo maqnaa.
Gaadhi inta uu dabada soo qabsaday ayuu goor habeen ah ku tuuray meel faras magaalaha ku beegan. Magaalooy indho badan! Gaw ma cid buu ka garanayaa magaalada, markuu qaddar ku dawakhay baabuurta iyo dadka tirada badan ee is dhaafdhaafaya ayuu gidaar yar is laabay markuu tabcaan cagaha qaadi kari waayay.
Cadceedda falaadhaheedi markay indhaha kaga dhaceen ayuu ka booday hurdadii oo inta uu indhaha mar maray socod dhaqaajiyay siduu u wareegayay maalintii oo dhan ayuu gabalku u dhacay isaga oo aan quud afka saarin.
Dhawr cisho markii ay is waajaheen isaga iyo magaalkii maalintii dambe meel uu ka keenay mooyee daasad baalash ah ayuu dadka la daba ordi jiray kaas oo kii doonaana siiyo gunnada yare ee kabo misixidda kii doonaana u hanjabaa ama dilmo ugu daraa. Daasaddii ka ilbax oo imika hudheel ayuu weelka u xalaa, saddexdiisa waqtina ka cunaa habeenkiina u seexdaa woxoogayna ka helaa. Waabu ka raystay dabayshii iyo siigadii iyo nimankii ku dibbiro dhacsan jiray oo hadda wuuba naaxay oo garanba maysid hadduu kaa soo hor baxo.
Noloshan iyo shaqadan aad buu ugu reeyay ninkii hudheelka lahaa laftarkiisu wuu dareemay kartida dheeraadka ah ee yarka kadibna miisaska inuu masaxo shaqada muddalabnimadana barto ayuu ku amray duhur isagoo cad la soo hambeeyay oo wada baruur ah afka kula jira. Sidii buu yeelay oo miisaskiiba kumuu eekaane markiiba wuxu noqday muddalabka ugu gacanta fudud ee hudheelka jooga.
“Caliyoow nafar bariisa!”
“Caliyoow aniga wasladdaydii iyo nafar isku jir ah iila soo dhakhso”, dhammaan macaamiishi huteelku Cali mooyee way diideen in cid kale dalabka ka qaaddo. Mulkiilihii wayba farxad galisay arrintani oo halkii ay saddex ka shaqayn jireen Cali ayaaba ku filnaaday, mushaharkii baa loo kordhiyay.
Hudheelkii Caligaab ayayba isku badashay goobtii. Ninkii hudheelka lahaa waabu ka xanaaqay kan yare e magaaladii la jeclaysiiyay in uu hudheelka kala wareego. Kadib hanjabaad iyo shaqadaada ku eekow oo dadka hala sheekaysan uunbuu uga bilaabay taas oo markii danbena si badheedh ah banaanka uga saaray shaqada dharaar cad.
Cali maanta xeelad iyo xirfad hudheel lagaga shaqaysto oo ka dhimani ma jirto. Dhaqaalana inkasta oo aanu haysan wax buuran haddana waxoogay uu ku uruuriyay daasad waa hayaa. Qolkii uu kiraystay ee uu ku bilaabay waa ka maanta heerkaa maraya, tan iyo maalintii wuxu ku jiray uun shaqo iyo orod iyo xoolo urursi taas weeye malaha sababta ilowsiisay guur iyo aduunyo oo dhanba.
Caawa waxa kale oo uu soo xasuustay aabbihii
“Tolow miyuu noolyahay, maalin kaliyana maad booqan. Islaantii baasayd ee barigii ku garaaci jirtay may nooshahay iyadna?!”, Imika haddii aan arko malaha cunaha ayan ku dhagi lahaa.
Habeenkii oo dhan siduu u fikirayay ayaaba waagu u baryay, jiifkii intuu ka kacay ayuu albaabada u furay meheraddii oo shaqo cusub bilaabay.
Cali habeen oo dhan waa u hurdo la’aan, maalin oo dhanna waa u shaqo oo waakan durba cirraystay. Wajigiina soo ururay timihiisa xabbad madow ka dhex heli maysid! oo goormuu sidan u gaboobay? Qofkii yaqaanay hadduu ka soo hor baxo garan maayo kii aan aqoon u lahayna oday sagaashan jir ah uun buu moodayaa. Waa goblan, reer iyo ubad ma leh, qoyskiisiina waaguu ka yimid baa ugu danbaysay!
Posted by Muna Ahmed at 5:12 PM